မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: January 2012
ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုများတိုးတက်ရေး ၊ ကြောထောက်နောက်ခံအဆောက်အဦးများ တိုးတက်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေး၊ ဗဟိုဘဏ်လုပ်ငန်းနည်းပညာများ စသည်ဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး အထောက်အကူပြုနည်း ပညာများ ကိုသင်တန်းပေးမည်ဟုဆိုပါတယ်။
၂၀၁၄ အာဆီယံဥက္ကဌ ရာထူးယူတဲ့အခါ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနဲ့ သံတမန်ရေးရာ နည်းပညာများ ကို လည်း သင်တန်းပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အခြင်းခြင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု တွေကိုလည်း တိုးမြှင့်မှာပါ။ ၎င်း အပြင် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း၊ အခြားသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနဲ့၊ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရေး စသည်ဖြင့် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံပါဝင်မှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ စင်္ကာပူနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ၊ ရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ သင်တန်းပေးခြင်း လေ့လာဆောင်ရွက် ခြင်းလုပ်ငန်းများဟာ ရေရှည် ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာတွေ ကို စင်္ကာပူလို နိုင်ငံငယ်တစ်နိုင်ငံက လေ့လာသင်ယူရတယ်ဆိုတာတော့ မြန်မာတွေဆင်ခြင်ရမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လောက် နောက်ကျနေပြီလည်းဆိုတာလည်း သတိပြုရမှာပါ။
အဲဒီလိုပဲမြန်မာတွေသင်ယူရမဲ့နည်းပညာတွေ ကမ္ဘာမှာ အများအပြားပဲရှိတယ်ဆိုတာပါ နားလည်ရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အချိန်နောက်မကျစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာရဲ့နယ်ပယ်ဟာ အလွန်ပဲ ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ အမတ်လောင်းဝင်ရွေးမယ့် သူတွေလည်း အမတ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာ ကအစ နည်း ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သိပ္ပံနည်းပညာတင် သာမက ၀ိဇ္ဖာနည်းပညာတွေဟာလည်း အလွန်ပဲ လိုအပ်နေပါတယ်။ နည်းပညာမတတ် လို့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ပြည်ပ ကအလွယ်တကူဝယ်သုံးလို့ရပေမဲ့ အမတ်တစ်ယောက် တိုင်းပြည် အုပ် ချုပ်ရေးနည်းပညာကို နားမလည်ရင် အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရပါဘူး။ တိုင်းပြည်မအုပ်ချုပ်တတ်ရင် တိုင်းပြည်ပျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကို စောင့်ရပါဦးမယ်။ မြန်မာပြည် ကတက်ကြွသူတွေအများစုဟာ ခေါင်းဆောင်ရော နောက်လိုက်ရော တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာ များကို လေ့လာစရာများစွာကျန်နေပါတယ်။
လာမဲရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူများ မှန်ကန်စွားရွေး ချယ်နိုင်စေဖို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
The courses will cover investment promotion, infrastructure building, trade, tourism development and central banking, according toastatement accompanying the Singapore-Myanmar Technical Cooperation Program agreement, which was signed duringastate visit by Myanmar's president, U Thein Sein.
Mr. Thein Sein is onathree-day trip to Singapore, his first since he became president last year and began overseeingaseries of economic and political overhauls. Myanmar was previously governed byasecretive military regime whose harsh rule drew criticism from human-rights groups and triggered economic sanctions by Western nations. The U.S. sanctions block investment by most U.S. companies.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:36 PM0comments Links to this post
ဒါဆို NLD မှပိုက်ဆံလှူ နေတာတွေ ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပေးပါ။
ပြည်သူ အများ အနေဖြင့် ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရကိုသာမကNLDနှင့် အတိုက်အခံတို မျိုးစုံတို့၏ မဆီလျှော်မှု များကို ဝေဖန်ရဲသည့်နေ့ တွင်ဒီမိုက ရေစီရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ NLD ၏ ဒါနခန်းကို ဝေဖန်ခဲ့သည်မှာ အလွန်ကြာပါပြီ။ NLD မှ ကျပ် တစ်သန်းလှူနိုင်လျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဒေါ်လာ တစ်သန်း လှူနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့၏။ ဇေကမ္ဘာ ဦး ခင်ရွှေ မှာ ကျပ်သန်း ပေါင်း တစ်သိန်း မတည်၍ မြရိပ်ညိုဖေါင်ဒေးရှင်း မှ လှူသည်ကို မည်သို့ သဘောထားမည်နည်း။ ဦးခင်ရွှေသည် ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်သည့်အတွက် ပိုက်ဆံလှူခြင်း မှာ မဲဝယ်ခြင်း မဲဆွယ်ခြင်းဟုသာ ပြောရပေမည်။ ဂီတပွဲတော် ကြီး တစ်ခုလုပ်မှ ကျပ် သိန်း ၅၀၀ ရခဲ့သည်။ အဆိုတော်များမှ မေတ္တာဖြင့်သီဆို ၏။ နောက်တော့ NLD နာမည်တတ်၍ လှူသည်။ ဘယ်မီဒီယာက မှမဝေဖန်ရဲကြ။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုသည်မှာ ပါတီအားလုံးအတွက် တရားမျှတဖို့လိုသည်။
ထားဝယ်မြို့တွင် NLD ပါတီ၏ မဲဆွယ် မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက် (7DAYS NEWS ဂျာနယ်မှဖေါ်ပြသည်)
““မဲဆွယ်တဲ့နေရာမှာ ကတိလည်းမပေးရဘူး။ ပစ္စည်းလည်းမပေးရဘူးနော်။ မဲဆွယ်တယ်ဆိုတာ မဲရဖို့အတွက် ၊ မဲရပြီး ပြည်သူ့မေတ္တာနဲ့ ယုံကြည်မှုကိုမရနိုင်ရင် ဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူး။ ဒီမဲပေးထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပေးတဲ့တာဝန်ကို မကြေဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီလူတွေကို လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူး။ မလုပ်နိုင်တဲ့ကတိတွေကို လွယ်လွယ်မပေးပါနဲ့။ ငါတို့အဖွဲ့ချုပ်ကိုသာ မဲထည့်မယ်ဆိုရင် ဒါတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးမပြောပါနဲ့။ ပြည်သူတွေကို လှည့်ဖျားတဲ့ပါတီတွေက အချိန်တိုသာ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ ရေရှည်မှာကျဆုံးမှာပါ”
(ထားဝယ်မြို့၊ ဆေးရုံလမ်းအတွင်းရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ပါတီဝင်များနှင့် ပြည်သူလူထုကို ယခု နံနက် ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်။ ယခု ထားဝယ်မြို့တွင်းမှ လောင်းလုံမြို့နယ်သို့ စတင်ထွက်ခွာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကြိုဆိုနေကြသော လူထုကြီးကို မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်နေရပြီး ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အားလုံးမှ လိုင်းကားများက ယနေ့မပြေးဆွဲတော့ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားကြိုဆိုရင် ရောက်ရှိနေကြသော လူများအား ပို့ဆောင်ပြေးဆွဲပေးနေကြောင်း သိရသည်)
NEWS SOURCE --7 DAYS NEWS JOURNAL
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:36 AM2comments Links to this post
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုကိစ္စများ နှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများမှာ ABSDF တွင်တာဝန်ယူခဲ့သော ခေါင်း ဆောင်များအား လုံးဖြစ်ပါသည်။ အချို့က မိမိတွင်တာဝန်မရှိပါဟု မီဒီယာတွင် တရားဝင်ပြောနေကြ၏။ တာဝန်ရှိသည်ဆိုခြင်းမှာ အဖွဲ့စည်းတွင်း ဖြစ်ပေါ်သော ကိစ္စများအားလုံးတို့အား ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ ခေါင်းဆောင် များမှတာ ၀န်ရှိခြင်းကိုဆို လိုပါသည်။ ထိုလူသတ်မှုတွင် ပတ်သက်သည်ဟု တိုက်ရိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုမိုးသီးဇွန် ၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ ကိုသံခဲ အစရှိတဲ့ခေါင်းဆောင် တွေအနေနဲ့ ဦးဆောင်သူ (သို့) ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေ အဖြစ် တာဝန်ရှိကြောင်း တာဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
.Saturday, 28 January 2012
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 5:23 PM3comments Links to this post
ပြည်ပရင်းနှီးမှုများအား ၈ နှစ်အထိအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်ဟုဆို
'Open door' Myanmar offers 8-year tax break to foreign firms
By Chris Otton (AFP) –6hours ago
DAVOS, Switzerland — Myanmar's government said Saturday it planned to offer eight-year tax exemptions to foreign investors as Western companies "rushed" to build ties with the one-time international pariah.
Industry Minister U Soe Thane told reporters there had been huge interest in Myanmar from business leaders he had encountered at the World Economic Forum in Davos as the Southeast Asian country's reform process gathers pace.
"They are rushing to us," he said. "We are just opening the door."
The minister said that Myanmar expected its economy to grow by six percent in the coming year and that it should be an attractive location to foreign investors -- citing as proof his successful visit to Davos.
"I have met withalot of people -- not just ministers but CEOs. We have engaged with them, explained our potential, our location at the junction of China and India. Our location is very favourable.
"We havealot of hydro potential, we have lots of fishing potential,abig fisheries area. Also our people know the English language, it is easy to communicate," he said.
Deputy railways minister Lwin Thaung said the government was looking to enact radical legislation to attract investors.
"Presently we haveaMyanmar investment law which is rather restrictive, but we are now revising it," he said.
"We have hired foreign consultants ... and we have told them to draw up the law so as to be more attractive than our neighbours.
"It will give tax exemptions for up to eight years and, if the enterprise is profitable for Myanmar, we will extend the incentive. We have already drafted the bill ... and at the end of February the law will come out."
The European Union is considering lifting sanctions against Myanmar as soon as February, according to diplomats in Brussels, while Washington has promised further reforms will be met with US rewards.
A few Western corporations such as French oil giant Total do haveapresence because the sanctions framework permitted firms that were already operating in the country at the time they were imposed in the 1990s to stay.
U Soe said Myanmar had significant gas reserves located along its west coast, and was already supplying China and Thailand. It also had major potential for rice exports, he added.
The invitation for the ministers to Davos is yet another sign of how Myanmar is being brought in from the cold sinceanominally civilian government took over last year and then opened talks with opposition leader Aung San Suu Kyi.
US Secretary of State Hillary Clinton paidalandmark visit to Myanmar in December and afterwards moved to restore full diplomatic relations.
Lwin however denied that sanctions had beenafactor in the reform process.
"Our political reforms are not connected to the pressure from the outside. It is what is good for the people, good for the country and for the whole world community," he said.
Among the areas that the government is hoping to see most investment is the tourist industry and U Soe said hotels were already struggling to cope with demand.
"Tourism is booming. In Yangon there's no room.. And it's not only in Yangon but Mandalay and Inle Lake," he said in reference to the country's two biggest cities and one of its main tourist draws.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:27 PM0comments Links to this post
အမေရိကန်က မြောက်ကိုရီးယားမြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို ၀င်ပါပြီ
မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေလိမ်မာဖို့လိုသည်။ ယန်းကီးက သူလိုချင်တာ ရအောင်ယူဖို့လုပ်နေပြီ။ အမှန် တော့ အမေရိကန် အနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စနှင့် စီးပွားပိတ်ဆို့မှုဖွင့် လှစ်ရေး ကို သီးခြားစီ လုပ်သင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ။ မြန်မာပြည်၏ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကိစ္စကို ၀င်ရောက် ဆရာလုပ် ခြင်း ကတော့ ကောင်းသော အစဉ်အလာမဟုတ်ပေ။
Myanmar must break ties with N. Korea: McConnell
'We want reassurance that they're going to discontinue whatever military-to-military relationship they may have with North Korea,' Republican Senate Minority Leader Mitch McConnell told reporters. -- PHOTO: AFP
WASHINGTON (AFP) - The top US Senate Republican on Tuesday said he could back easing sanctions on Myanmar if it advancesahost of democratic reforms and breaks off any military relationship with North Korea.
'We want reassurance that they're going to discontinue whatever military-to-military relationship they may have with North Korea,' Republican Senate Minority Leader Mitch McConnell told reporters.
Mr McConnell, newly returned fromatrip to the country known in Washington as Burma, said he favoured sendingaUS ambassador to Myanmar, citing the new regime's plans to release political prisoners and holdaby-election on April 1.
'I recommended to them that they have international observers there. That's not uncommon in countries that are having first-time elections,' said Mr McConnell, who has long had an interest in relations between the two countries
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:43 AM0comments Links to this post
EU mulling 150-mln-euro aid package for Myanmar
BRUSSELS — The European Union is mullinga150-million-euro aid package to help Myanmar's new army-backed government continue on the path of reforms, EU diplomats said Wednesday.
A possible package, focused on health, education, agriculture and institutional capacity-building, was discussed by EU foreign ministers at talks in Brussels on Monday, saidasource close to the matter who asked not to be identified.
At the talks, EU ministers agreed on the immediate lifting of travel bans on Myanmar leaders asafirst step towards easing sanctions against the country of 60 million people.
Welcoming "the remarkable programme of political reform" undertaken by the nominally-civilian government, the 27-nation bloc said further positive steps on the road to political change "would lead to the further easing or lifting of the restrictive measures."
It called for the unconditional release of remaining political prisoners "within the next few months" and the "free and fair" conduct of the April 1 elections, which will seeahistoric bid for parliament by democracy icon Aung San Suu Kyi.
At stake are embargos on arms deliveries, logging and mining while the assets of more than 900 firms and utilities have been frozen.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:31 AM0comments Links to this post
. ကျွန်ုပ်တို့၏ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ရက် ပါတီကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အများသိကြသည့် အတိုင်း ထိုအချိန်က ပါတီမထောင်ရေး နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရေး လှုံ့ဆော်မှုများ ပြင်း ထန်နေချိန်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူများ နှင့် ပါတီထောင်သူများအား ရန်သူ့လူဟု တိုက်ခိုက်နေသော ကာလဖြစ်ပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး အယူအဆများပြင်းထန်သည်ဖြစ်၍ ပါတီ၏ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အချို့ အနီးကပ်မှ သွေးပျက်၍ နှုပ်ထွက်သွားသဖြင့် အနည်းဆုံး ၃ ယောက်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ ပါတီ ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။
NO VOTE လှုပ်ရှားမှု ကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ပိုက်ဆံထုတ်ပေး
ဤ သို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပါတီ၏ ဥက္ကဌ ဖြစ်သော ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်သည် ရွေးကောက်ပွဲNO VOTE သမား များအား ဆန့် ကျင်၍ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ရဲဝံ့စွာဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက် ပွဲဆန့်ကျင်သော NLD ၏နောက် လိုက်နောက်ပါများက ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် မဲဆွယ်ရာနောက်သို့လိုက်၍ NO VOTE စာရွက်များ လိုက်လံဝေငှကြ၏။ ထို NLD ၏ နောက်လိုက်များ ထိုသို့ ဒုက္ခပေးနိုင်ရန် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီက ပိုက်ဆန်ထုတ်ပေးခဲ့၏။ NO VOTE လုပ်လျှင်သူတို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသာ အနိုင်ရမည်မဟုတ်ပါလား။
NO VOTE လုပ်ငန်းများကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင် လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ရန် မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များ မရနိုင်ဖြစ်ရသည်။ မဲရုံတစ်ရုံလျှင် မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ကျစီဖြင့် မဲရုံ ၂၀၀ ကျော်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀ ကျော် မထားနိုင်ခဲ့တော့ပါ။ ဤသို့ဖြင့် ကြံ့ဖွတ်တို့ စိတ်တိုင်းကျ မဲခိုးခွင့် ရခဲ့၏ ။ မဲများ လဲလှယ်ခွင့်ရခဲ့၏။ NO VOTE ဟူသော မူဝါ ဒအမှား တစ်ရပ်ကြောင့်ပြည်သူ့မဲများဆုံးရှုံးခဲ့ရ သည်။ ပါတီပျက်ခဲ့ရသည်။ နောက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုသို့ရောက်ရန် ၅ နှစ်စောင့်ခဲ့ရလေပြီ။ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲဆိုသည်မှာ နေရာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏။
ဤသို့ဖြင့် မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် အဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ ဥက္ကဌ ဦးကောင်းမြင့် ထွဋ်နှင့် အဖွဲ့များ မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ပါတီသစ် အဖြစ် မှတ်ပုံတင် ရန် ကြိုးစားခဲ့၏။ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်အား ပြည်ပ စည်းရုံးရေးနှင့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး လုပ်သော မဟာမိတ်ပါတီအဖြစ်သာ ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် ဦးဆောင်ပါတီမရှိ ပြိုင်ဘက်ပါတီသာရှိ
ပါတီ ၂ ရပ်စလုံးကို တည်ထောင်သူများမှာ ၁၉၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ်၏။ ကျောင်းသား များ အဖြစ်ထက် နိုင်ငံရေးသမားများ အဖြစ် ခံယူပြီး ပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲတာဝန်ယူကြသည်။ ဤ သို့ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက် သည်မှာ မှားယွင်းသောမူဝါဒ ဖြစ်သည့်အလျှောက် အချိန်လွန်မှ အမြင်မှန် ရလာကြသော NLD မှ အဖိုးအိုတစ်သိုက် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အရှိန်အ၀ါကို သုံး၍ ပါတီထောင် ခြင်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်း တို့အား လုပ်ဆောင်လာကြသည့် အခါလည်းဖြစ်ပေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ NLD ဟူသော နာမည်ကြီး ပါတီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ရဦးမည်ဖြစ်ပေသည်။
ပြည်သူများ သိရမည့် အချက်မှာ ဒီမိုကရေစီလောက တွင် ဦးဆောင်ပါတီဟူ၍ မရှိပဲ ပါတီစုံတို့သည် ပြိုင်ဘက်သာလျှင်ဖြစ်ကြကုန်၏။ မဲထဲ့ကြမည့် ပြည်သူတို့သည် မိမိတို့မဲထဲ့မည့် ပါတီ၏ မူဝါဒ နှင့် မိမိ တို့မဲထဲ့မည့် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ အရည်အချင်း နှင့် မူဝါဒကိုသာ အကဲဖြစ်ရလေ့ရှိပါသည်။ NLD ပါတီအား ဦးဆောင်ပါတီဟု သုံးနှုံးနေခြင်းမှာ မှားယွင်းခြင်းမျှသာဖြစ်ပါ၏။ NLD ခေါင်းဆောင်များက မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး သူတို့ပါတီသာလျှင်ဦးဆောင်ပါတီဖြစ်သယောင် ခေါင်းဆောင်ပါတီဖြစ်သယောင် ရောချနေကြ၏။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆိုသူများကလည်း NLD ကိုဝန်းရံကြဟူသော မှားယွင်းသည့် မူဝါဒကို ချမှတ်ကြ ၏။ ကြေငြာချက်ထုပ်ကြ၏။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တရားဝင် တင်ပြ ကြ၏။ အမှန်တော့ ကျောင်း သားအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ မည်သည့်ပါတီ၏ လက်ကိုင်ဒုတ် မှ မဖြစ်ရပါ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဟု အမည်ခံထားသူများက NLD ကိုထောက်ခံမှုပြုခြင်းသည် ၎င်းတို့ ကိုယ်စားပြုသော ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကို ပါ ပါတီတစ်ရပ်အားထောက်ခံစေခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဤသည်ကို မည်သို့မျှငြင်းချက်ထုတ်၍ မရပါ။ အကယ်၍ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆိုသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ရပ်ကိုထောက်ခံလို လျှင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မဟုတ်တော့ကြောင်း မည်သည့် ကျောင်းသားအဖွဲ့ အစည်းကိုမျှ ကိုယ်စားမပြုတော့ကြောင်းကြေငြာပြီး မှ ပါတီတစ်ရပ်ရပ်အားထောက်ခံသင့်ပေသည်။
သို့မဟုတ်ပါလျှင် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုသည်မှာ အဓိပါယ် မရှိတော့ပြီ။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ယုံကြည် သည်ဆိုခြင်းမှာ လည်း မဟုတ်တော့ပြီ။
သို့ဖြစ်၍ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ အနေဖြင့် NLD ပါတီအားဝန်းရံပါမည်ဆိုခြင်းကို ပယ်ဖျက် ပေးပါရန် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ယုံကြည်သော ကျွန်ုပ်တို့ပါတီ မှ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူများလည်း ပါတီတစ်ခုခုကို တည်ထောင် ကောင်း တည်ထောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းမှ အခြား နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကို ထောက်ခံပါသည်၊ ၀န်းရံပါသည်ဟုဆိုလျှင် မည်သို့သဘောထားမည်လဲ ဟု ဖြေကြည့်စေလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးဆက်သစ် လူငယ် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို မည်သို့သင်ကြားပေးမည်နည်း။ မိမိယုံကြည်ရာပါတီ တစ်ခုခုကို ထောက်ခံရမည်ဟု သင်ကြားမည်လား။ ကျောင်းသား အဖွဲ့အစည်းဆိုသည် မှာ လွတ်လပ်စွာရပ်တည်ရမည်ဟုသင်ကြား မည်လား။ အားလုံးစဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်သည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 8:02 AM 1 comments Links to this post
DAW SU -
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:24 PM0comments Links to this post
အီးယူမှ စီးပွားပိတ်ဆို့မှု ဖွင့်လှစ်သောကြေငြာချက်မူရင်း
EU 23-01-2012 -
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 8:32 AM0comments Links to this post
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု နဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က လာတဲ့ သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ ခက်တာက ကော်မရှင်ကို ဘယ်သူတွေနဲ့ဖွဲ့တယ်၊ သူတို့ဟာ ဘယ်လောက် တရားဝင်တယ်၊ ဘယ်လိုစုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတော့ တိတိပပ မသိရသေးပါဘူး။ ဖွဲ့တာကတော့ ABSDF ဌာနချုပ်က တာဝန်ယူပြီးဖွဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါ။
ဒါကြောင့် ABSDF ဌာနချုပ်ကို သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကိစ္စအားလုံးကို ကြိတ်ဖြေရှင်း ဖို့ကြိုးစားတဲ့ နည်းနာတွေကို ရပ်တန့်သင့်ပါပြီ။ ခက်တာက ကိုအောင်မိုးဝင်းတင်ပြနေတဲ့ မှတ်တမ်းမှာ ရော်နယ် အောင်နိုင်ကိုသာ ဇတ်လိုက်လုပ်ထားပေမဲ့ အမှန်တော့ ABSDF လူသတ်မှု ဇတ်လမ်းတွဲမှာ အခြား အဓိကဇတ်ကောင်တွေ ဒါရိုက်တာတွေ ဇတ်ပို့ဇတ်ရံတွေ နဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေပါ ပါဝင်နေတာပါ။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို လူသိရှင် ငြား တရားဝင်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင် ဇတ်လမ်းတွဲမှာ ပါတဲ့သူတွေ အကုန်ပေါ်မှာမို့လို့ ABSDF ကိုဖိအားပေးခံနေရ တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင် ABSDF သတ်မှုဇတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုတည်း ဖြစ်လာမှာ တင်မကပါဘူး။ ခိုးမှု၊ မုဒိန်းမှု၊ အလွှဲသုံးစားလုပ်မှု၊ လိမ်လည်မှု စသည်ဖြင့် ရာဇ၀တ်မှု မျိုးစုံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ABSDF ဟာ စစ်တပ် ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စစ် တပ်တိုင်းမှာ စစ်ရေးချုပ်၊ တပ်ထိန်းချုပ်၊ စစ်ဥပဒေချုပ် ဆိုတဲ့ တပ်ကိုထိမ်းကြောင်းတဲ့ တပ်မှုးတွေကိုခန့်အပ် ရပါတယ်။ မတစ်ထောင်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်း ပြီး လက်နက်တွေကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ လူသားတွေကို ထိန်း ရတာ မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရဟာ သူ့လက်ထက်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခြစားတာကိုခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် လက်မခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးရောက်လာခဲ့ရင် ဖမ်းဆီးထောင်ချတာမျိုး၊လုပ်လေ့ရှိပါတယ်၊ ဗိုလ်ကျော်ဘ၊ ဗိုလ် ထွန်းကြည်၊ စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ဝင်းမြင့် စသည်ဖြင့် စစ်ဗိုလ်များစွား ထောင်နန်စံရတာတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ပိုင်းက တပ်ထဲမှာလည်း လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ဖြုတ်ထုတ်သတ်တွေလုပ်လို့ သူတို့လည်း အခုလောက် အာဏာမြဲနေတာပါ။
ရန်သူအားရမယ်၊ ပြည်သူတွေစိတ်ဓါတ်ကျမယ် စသည်ဖြင့် ခြောက်လုံးတွေနဲ့ မကောင်းမှုတွေသက်ဆိုးရှည် ခဲ့ရတာပါ။ DVB ရဲ့ ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံဆိုရင်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ အထပ်ထပ် သတိပေးနေတဲ့ကြားထဲ့က လူရှုပ်တွေပေါင်းမိသွားတော့ အခုမြင်တဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကုန်တာပါပဲ။ DVB ကိစ္စမှာ ဒါရိုက် တာ ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအေးချမ်းနိုင်နဲ့ ကိုခင်မောင်ဝင်းတို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အမှန်တော့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ DVB မှာ မရှိသင့်တော့ပါဘူး။ DVB ကတရားခံတွေရဲ့ ခိုးရာပါငွေတွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲမှာပါ တိုက်တွေ ကားတွေဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေ ကို တော့ သတင်းထဲမှာ ပါမလာပါဘူး DVB ကိစ္စမှာ နော်ဝေ အစိုးရက နဲ့ NORWAY POLICE ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး နော်ဝေ တရားရုံးမှာ ရုံးတင်တာမို့လို့ သက်ဆိုင်ရာ တရားခံတွေ ကိုအရေးယူခွင့်ရခဲ့တာပါ။
ထိုင်း မြန်မာနယ် စပ်မှာ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွား အလွဲသုံးစားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းအချက် အချို့ ကဆိုပါတယ်။ အလွဲသုံးစားမှု နဲ့ မသမာမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်သူအများစုတွေ ဟာလည်း အပြင်လူမဟုတ်ပါဘူး။ အဖွဲ့စည်း အသီးသီး ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်လူက ဘယ်လိုလုပ် ခြစားလို့ရမှာလည်း၊ ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့ ဘလောက်စာမျက်နှာမှာတင်ပြတဲ့ မဲဆောက်က ခေါင်းဆောင်တွေ ပတ်စ်ပို့ ကိုင်ထားတယ်ဆိုတာလည်း အမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်စ်ပို နဲ့ ဗီစာ အသက်ရှင်နေဖို့အတွက် အမေရိက ကိုသွားရပြန်ရ လေယဉ်လက်မှတ်နဲ့ ခရီး စရိတ်တွေဆိုတာ အဖွဲ့ရဲ့ရံပုံ ငွေတွေထဲက သုံးရတာ ဖြစ်ပါ့တယ်။ မေးလိုက်ရင်တော့ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ ရဲဘော်တွေဟာ အလွန်ပဲ ဆင်းဆင်းရဲရဲနေရတာပါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်က ABSDF ကို နော်ဝေက တစ်နှစ် ထောက်ပံ့ငွေ ခရိုနာ ၄ သိန်း (ဘတ် ၂၄ သိန်း) ခန့် ထောက်ပံ့ငွေဖြတ် တောက်လိုက်တဲ့ အတွက် ရံပုံငွေ အလွန်ပြတ်သွားတဲ့ အတွက် အလှုငွေထဲ့ကြဖို့ ဆော် သြတာနဲ့ ကြုံရဘူးပါတယ်။ ပိုက်ဆံဖြတ်လိုက်တာကို သာသိရပေမဲ့ ပိုက်ဆံရနေတုန်းကတော့ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်မှာတော့ စစ်ဖိနပ်တောင်စီးစရာ မရှိတဲ့ ABSDF ရဲဘော်တွေ ကို တစ်ရံကို ဘတ် ၃၀၀ နဲ့ စစ်ဖိနပ် ၀ယ်ပေးရဘူးပါတယ်။ ABSDF ကရဲဘော်တွေပြောတာက တော့ စစ်ဖိနပ်စီးထားလို့ မိုင်းနင်းမိရင် ခြေထောက်တစ်ခုလုံးပြတ်မထွက်ပဲ အဖြားလောက်ကပဲပြတ်ထွက် တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဝယ်ပေးခဲ့တာပါ။ နော်ဝေက ပေးတဲ့ ခရိုနာ ၄ သိန်း နဲ့ ဘာတွေဝယ်လိုက်ပါသလဲ။ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်လို့ပြောဦးမလား။ ဒါကိုတော့ စစ်ရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက် တွေဖြစ်လို့မပြောတော့ပါဘူး။
ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင် ပြောခဲ့တဲ့ လူတစ်ထောင်မှာ သူခိုးတစ်ယောက်ရှိရင် အင်မတန်များတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။
အခုတော့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က အလွဲသုံးစားမှုမှာ ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးကြပါတော့မယ်။ ဒီလူတွေမြန်မာပြည်ထဲရောက်ရင် ဘာလုပ်ကြမှာလည်း။ NGO တွေထောင်ပြီး ကောင်းစားကြဦးမှာ မြင်ယောင်ပါသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ CLICK NGO တွေက လည်း အဆင်သင့်ရှိပြီးသားမို့ ပြည်တွင်း NGO လောက အတွက်တော့ ရင်လေးစရာပါပဲ။ ပြည်သူကို ဘမ်းပြပြီး ဘယ်လောက်များ ကိုယ်ကျိုးရှာမလဲဆိုတာ မှန်းလို့ရနေပါပြီ။
အခုချိန်မှာ ပြည်တွင်း ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေကလည်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့အတွက် ပြည်ပက လူရှုပ်တွေနဲ့ပေါင်းမိလို့ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်လာသန်းကြွယ်သူဌေး နိုင်ငံရေး သမားတွေပေါ်လာဦးမလားပဲ။ အခုတောင် မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေကို ပြည်ပမှာ သင်တန်းပေး နေတဲ့ PROGRAMM တွေ နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်ပ ၀ိုင်းတော်သားတွေ တော်တော်များနေပါပြီ။ NLD ကလူငယ်တွေတောင်ပါသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။
ဖြစ်လာနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ တိုင်းရေးပြည်ရေး အပြောင်းအလဲဖြစ် လာလို့ ပြည်ပက အရှိန် အဟုန် နဲ့ ၀င်လာမဲ့ NGO တွေနဲ့ ထောက်ပံ့ငွေတွေ ကို လူလယ်လူရှုပ်တွေလက်ထဲကို မရောက်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်ဟာ NGO တွေ စိတ်ပျက် တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သဘောတူညီမှုကြောင့် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ တစ်ရာ ရခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေတုန်း ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ NGO တွေက တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ရေးသူ- (ကို)အောင်မိုးဝင်း ယခင်အပိုင်း(၅)မှ အဆက် ….
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ကို တင်ပြခဲ့တာ အပိုင်း (၆)ကိုရောက်ရိ်ှလာခဲ့တယ်။ ဒုတိယအဆင့် ကို ရောက်လာပြီ လို့ ဆိုရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေ နဲ့ ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသူတွေကို လေးလေးနက်နက် တိုက်တွန်း ချင်တာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကျောင်းသား တပ်မတော်ရဲဘော်၊ သူငယ်ချင်း တွေရဲ့ လိပ်ပြာဝိညာဉ်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို သိက္ခာရှိရှိ
ကာကွယ်ခုခံသောအားဖြင့်၊ ကာယကံရှင်တွေဟာ သတ္တိရှိရှိ၊ ဗြောင်ထွက် ဆွေးနွေးကြပါ။ တယောက်ချင်းစီ ဖြစ်ဖြစ်၊ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်ဖြစ်၊ လိုအပ် မယ်ထင်တဲ့ စာတမ်းတွေကို တင်ကြဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ ယူဆပါ
တယ်။ သူများရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာ မှတ်ချက်ဝင်ပေးတာမျိုးတွေ၊ ပဟေဋိ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် တွက်သလိုမျိုး မေးခွန်းထုတ်နေတဲ့လုပ်ရပ် တွေ၊ ပြဇာတ်ထဲက ဒဏ်ရာအနာတရမင်းသားတယောက် ကိုယ့်ရဲ့
ကြေကွဲမှုကို အယားဖြေ တယောထိုး ငိုကြွေးနေတာမျိုးတွေကို ရပ်သင့် ပါပြီ။ ကိုယ့်နှလုံးသားကို ကိုယ့်ဘာသာ သစ္စာရှိဖို့လိုပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်၊ ဗကသ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ရဲဘော်စိုးဝင်းသန်းနဲ့ ကျဆုံးခဲ့သော အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသားများ၊ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို ရိုးသားသန့်စင်စွာ သတ္တိရှိရှိရပ်တည်ခဲ့တဲ့ နန်းအောင်ထွေးကြည်နဲ့ တခြားရဲဘော်တွေအတွက် ဆက်လက်ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်။ မရှင်းမလင်းလုပ်နေတဲ့
သူတွေအတွက် ကျနော်တို့ရဲ့အသံတွေ တစုံတရာမှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ တိတိကျကျ ပြောချင်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်တွေကသူရဲဘော ကြောင်စွာ ဆက်လက် ငြိမ်သက်နေမယ် ဆိုရင်တော့ ကြိုတင် သတိပေးလိုက်ပါရစေ။ တတိယအဆင့်မှာ မုန်တိုင်း ကို ပို ဖြတ်ကြရပါ လိမ့်မယ်။ ပိုပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနဲမဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို ကြုံတွေ့ကြရပါ လိမ့်မယ်။
“ရော်နယ်အောင်နိုင် ရဲ့ အသံကို ကြားရတိုင်း ပါဂျောင်စခန်းမှာ ညှင်းဆဲ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ အသံတွေကို ကြားနေရတယ်၊ သူ့အသံမှာ မကောင်းဆိုးဝါး တစ်ကောင်ရဲ့ အခိုးအငွေ့တွေ ရိုက်ခပ်နေတယ်” လို့ အသက်မသေပဲ ပြည်တွင်းကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်ဟောင်း
တွေက ရင်ဖွင့်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ တကယ်တော့ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတဲ့သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် (၂၀) လောက်က မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ မတရားသဖြင့် စွပ်စွဲ သတ်ဖြတ် ခဲ့တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှု
တွေကို လူတွေမေ့ပျောက်လောက်ပြီ လို့ ထင်နေသလားမသိပါဘူး။
အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့အခါတိုင်း လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး သတိလက်လွတ် ပြောဆိုလေ့ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ အင်တာဗျုး တစ်ခုကတော့ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံးကို
မီးတောက်လောင်၊ ဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ လူသတ်သမား သံချောင်းတယောက် စစ်အစိုးရဆီကို လက်နက်ချပြီး ဝင်သွားတဲ့အခါ စစ်အစိုးရက သံချောင်းရဲ့ လူသတ်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုတွေ အတွက် သေဒဏ် (၅) ခါ ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်ကို ABSDF
(မြောက်ပိုင်း)နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အင်တာဗျုးလုပ်သူက မေးခွန်းတစ်ခု မေးတဲ့အခါ၊ သူက လူတတ်လုပ်ပြီး၊ “ ABSDF မှာ ရန်သူ့သူလျှိုလို့ ယူဆသူအားလုံးကို သတ်ပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ မူ ရှိတယ်” လို့ ဖြေကြားခဲ့တယ်။
အထဲမှာ နားထောင်လိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်ဟောင်း တွေက သူ့ရဲ့အမေးအဖြေကို နားထောင်ပြီး ပါဂျောင်ဒေသဆီက မချမဆန့်အန်ထွက်လာတဲ့ ရဲဘော်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အော်သံတွေကို
နာနာကျင်ကျင် ခံစားလိုက်ကြတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတဲ့သူက လူသတ်မှုကို မိန်ရည်ရှက်ရည်ထောက်ခံ ပြောဆိုနေတုံးပါလား ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လိုက်ကြတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်က ဘာလို့ ထင်ယောင်ထင်မှား ကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်ဘာသာလိမ်ချင်နေရတာလဲ။
တကယ်ဆို ထွန်းအောင်ကျော် ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မန္တလေးကတည်းက ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ခဲ့တဲ့သူဖြစ်သလို၊ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်မို့လား။
ရန်သူ့သူလျှိုတွေဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲဖို့အတွက် အဆိပ်တွေ ခိုးယူလာခဲ့ပါတယ် လို့ စွပ်စွဲခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တယ်။ အဆိပ်ရှာမတွေ့တော့ လက်ဖြတ်တယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို မီးရှို့တယ်။ ရက်စက်မှုပေါင်းစုံကျူးလွန်ခဲ့ပြီး ခေါင်းဖြတ် သတ်ခဲ့ကြတယ်။ ABSDF(NB) စစ်ကြောရေးခေါင်းဆောင်တွေ ကျောင်းသားတွေထံမှာ ရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့ အဆိပ်တွေက သတင်းထောက်
တွေရှေ့မှာလည်း ရောက်ရော ဘာကြောင့် အရံသင့်ထုတ်ပြထားတဲ့ သက်သေခံ ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေရတာလဲ။ တတ်လည်းတတ်နိုင်ကြလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်မဲ့ ထောက်ကွက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပြန်တယ်။ သက်သေပြချက်တွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တော့ ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ ကြတဲ့ ရဲမေ၊ ရဲဘော်
တွေရှိကြပါတယ်။ ဒီအထဲက အထင်ရှားဆုံး သက်သေပြပါဆိုရင် ရဲမေ “သင်းသင်းညီ” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ABSDF (မြောက်ပိုင်း)ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ မျိုးဝင်းက သူတို့ဖမ်းထားတဲ့ ရဲမေတွေ
ကို ထောက်လှမ်းရေးဟုတ်ဟုတ် သေသေချာချာ စစ်မေးနိုင်ဖို့အတွက်၊ “သင်းသင်းညီ” ဆိုတဲ့ ရဲမေလေး ကိုလည်း ဖမ်းဆီးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး၊ သူတို့ဖမ်းထားတဲ့ “ ရန်သူ့ထောက်လှမ်းရေး” လို့ စွပ်စွဲခံရသူတွေအထဲကို ထည့်ထားပေးလိုက်တယ်။ “သင်းသင်း”လည်း အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေနဲ့
ရက်အတော်ကြာ၊ အတူသွားနေလိုက်ပြီးတဲ့နောက် သဘောပေါက်သွား တယ်။ “သူတို့ဟာ ထောက်လှမ်းရေးတွေ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အစိုးရကို တကယ် ဆန့်ကျင်ဖို့ လက်နက်ကိုင်နယ်မြေထဲကို ထွက်လာတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အစစ်အမှန်တွေဖြစ်တယ်”လို့ ABSDF ခေါင်းဆောင် မျိုးဝင်း
ဆီကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ မျိုးဝင်း ဆိုတဲ့ကောင်က “ မဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့ အဖြေကို မလိုချင်ဘူး။ “သူတို့ဟာ ထောက်လှမ်းရေးတွေဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ အဖြေကိုသာ လိုချင်သူဖြစ်တော့၊ “သင်းသင်းညီ”ရဲ့ စကားကို လက်မခံဘူး။ “သင်းသင်း” လည်း ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကျောင်းသူတွေနဲ့အတူရောပြီး နှိပ်စက် ညှင်းပမ်းခံခဲ့ရတယ်။
ရော်နယ်အောင်နိုင်က ၂၀၀၈ မတိုင်ခင်မှာ လန်ဒန်မြို့က ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း ဆီကို အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူရဲ့ အသံ ကို ကြားတိုင်း ငရဲကျနေသလို ခံစားနေရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်ဟောင်းတွေကလည်း ရော်နယ်အောင်နိုင် ကို တစ်ခုခု ပြန် တုန့်ပြန်
ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အော်စတြေရီးယားမှာ အခြေချနေတဲ့ “နန်းအောင်ထွေးကြည်” က ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဋ္ဌာနမှူး၊ ဒေါ်တင်ထားဆွေ ကို ဖုံးဆက်ပြီးပြောတယ်။ “အန်တီ တို့ ဘီဘီစီ ဋ္ဌာန က သတင်းထောက်တွေ အနေနဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်မြောက်ပိုင်း မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း
အရာတွေကို မကြားမိဘူးလား။ ကိုအောင်နိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေ ပြန်စုံစမ်းသင့်တယ်။ သတင်းထောက်ဆိုတာ ဘက်မလိုက်ဘူး လို့ သေချာရင် ဒီကိစ္စကို အလေးအနက်ထားသင့်တယ်- ဘာညာ ဆိုတာ တွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆွေးနွေးတယ်။ ဒေါ်တင်ထားဆွေက “ကိုအောင်နိုင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်သူမှ စောတက မတက်ပါဘူး။ မငယ် တယောက်တည်း တက်လို့လည်း သူ့ကို ရာထူးခန့်ထားရာကနေ ဖယ်ပစ် ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး တုန့်ပြန်တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည် ကလည်း “ဒါဆိုလည်း ရပါတယ် အန်တီ” ဆိုပြီး နောက်ထပ်တဆင့် တက်လိုက် တယ်။ ပြည်တွင်းက ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်တွေရဲ့ တိုင်စာတွေ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဋ္ဌာဆီကို ရောက်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပိုင်း ဋ္ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေက ရော်နယ်အောင်နိုင် အပေါ် အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ မစတင်သေးပဲ “ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ” ဆိုတဲ့ စိတ်အနှောက်အရှက် ဖြစ်တဲ့လေသံနဲ့ မေးခွန်းထုတ်လာတယ်။ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း ဋ္ဌာနဆီမှာ ပို့ထားတဲ့ တိုင်စာတွေအားလုံးကို နောက်ထပ် ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆီထပ်ပို့လိုက်တယ်။ ဘီဘီစီဋ္ဌာနရဲ့ ဒါရိုက်တာဆီကို ဖြစ်တယ်။ ဘီဘီစီ သတင်းဋ္ဌာနရဲ့ ဒါရိုက်တာက၊ မြန်မာပိုင်းဋ္ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေကို ခေါ်ပြီး မေးမြန်းခံရတော့မှ၊ ရော်နယ်အောင်နိုင် တယောက်လည်းဘီဘီစီ ဋ္ဌာန ကို စွန့်ခွာလိုက်ရတော့တယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ကာယကံရှင်တွေရဲ့ထွက်ချက်တွေ၊ မြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေ အကြောင်းတွေကို စာတမ်းတွေရေးသားပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့၊ ၂၀၈ နောက်ပိုင်းမှာထိ၊ဘီဘီစီက ဦးမောင်မောင်သန်းလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရော်နယ်အောင်နိုင်ကို အင်တာဗျုးလုပ်နေဆဲပဲဖြစ်တယ်။ စာတမ်းတွေကို သေသေချာချာ မဖတ်တာလား။ ဋ္ဌာနမှူးဆီက မဖတ်ရတာလား။ ဒါမှမဟုတ် မတရားသဖြင့်
သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေဘက်က သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ်မရှိတာလား ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ ကာယကံရှင်တွေမှ သိလိမ့်မယ်။ သတင်းသမားတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်အတွက် စိတ်မကောင်းစရာပဲလို့ ပြောယုံမှတပါး ဘာမှ မရှိပါ။
ဘီဘီစီ- မြန်မာပိုင်း ဆီကို စာပို့ခဲ့တဲ့ သင်းသင်းညီ ရဲ့ လက်ရေးမူ ကို ပူးတွဲ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သူမ ရေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျမနာမည် သင်းသင်းပါ။ လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်ကျော် ကာလက ABSDF (NB)ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တဦးပါ။ BBC မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် ဋ္ဌာနမှ ကိုအောင်နိုင် အား အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းကို ပြန်လည် စဉ်းစားစေလိုပါသည်။
ကိုအောင်နိုင်သည် ABSDF (NB) တွင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး အနေဖြင့်တာဝန်ယူစဉ်ကာလတွင်၊ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာများကို ပြန်လည်ပြီး သုံးသပ်စေချင်ပါသည်။ ထိုစဉ်က ABSDF (NB) မှ ရဲဘော်ရဲမေများကို ထောက်လှမ်းရေးဟု စွပ်စွဲပြီး၊ ဖမ်းဆီးသော အကွဲအပြဲ ပြဿနာများတွင် ကျမကို ABSDF (NB) မှ တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းအရေးမှူး မျိုးဝင်းမှ ဖမ်းဆီးခြင်း ဟန်ဆောင်ပြီး အကျဉ်းသားများကြားတွင် စုံစမ်းစေခဲ့ပါသည်။
ကျမက “အားလုံးထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်” ဟု ဆိုသောအခါ၊ တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မျိုးဝင်းမှ ၊ ကျမကို “သေချာရှာပါ ရှိကိုရှိတယ်” ဆိုပြီး ဆက်လက် ခိုင်းစေခဲ့ပါသည်။ ကျမကိုလည်း မျိုးဝင်းတို့ ခိုင်းထား သော လူမှန်းမသိ သောကြောင့်၊ စစ်ကြောရေးမှာ၊ ကျမကိုယ်တိုင် ရင်ဘတ်ထဲတွင် ကျင်စက်နှင့် တို့ကာ အနှိပ်စက် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ထို့နောက် ကျမက “ဒီလိုမျိုး မနေနိုင်ဘူး သတ်ရင်လည်း သတ်” လို့ ပြောသောအခါမှ ပြန်လွှတ် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အားလုံးထောက်လှမ်းရေးမဟုတ် ဟူသော ကျမ၏ ပြောဆိုချက် ကို လုံးဝလက်မခံပဲ၊ ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ်မှုများကို တရားမဲ့စွာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ညှင်းဆဲမှုများကို မတရားသဖြင့်ခံခဲ့ရပါသည်။ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ပဲ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူများမှာ၊ သမိုင်းကြောင်းအမှန်ကို ပြန်ပြောရန် မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျမက သေဆုံးသွားတဲ့ အကိုကြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော် (ဥက္ကဋ္ဌ) ABSDF (NB) နှင့် သူငယ်ချင်းရဲဘော်ရဲဘက်များကိုယ်စား ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။အသက်ရှင်ကျန်ပြီး ပြည်တွင်းပြန်ရောက်လာတဲ့ စွပ်စွဲခံရသူများထဲတွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေသည့်အတွက်၊ ထောင်ကျ နေသူများ၊ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူများ၊ အများအပြားပင် ရှိနေသည့်အတွက်၊ ယ္ခုတဖန် ကိုအောင်နိုင်၏ အင်တာဗျူးများကို သိရှိ ရသည့်အခါ၊ ထိုသူများအစား ကျမရင်နာမိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းစွာရှင်းလင်းခြင်းမရှိသူအား၊ BBC မှ ဝန်ထမ်းခံရန် သင့်မသင့်ကို ပြန်လည်ပြီး စဉ်းစားစေချင်ပါသည်။
မှတ်ချက်- ABSDF (NB) ဆိုတာ ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း)ကိုအတိုကောက် ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခုတော့ ရဲမေ “သင်းသင်းညီ” က ဗမာပြည်ထဲမှာ ပြန်ရောက်နေပါတယ်ကျောင်းသားတပ် မတော်မြောက်ပိုင်းမှာ မတရားသဖြင့်စွပ်စွဲ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တေးသီချင်းတွေ သီဆိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့အတူ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ထွက်လာရင် လည်း အားပေးလိုက်ကြပါအုံး လို့ နိုးဆော်လိုက်ပါရစေ။
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ -အပိုင်း (၇) - မှာ နောက်ထပ် ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်၊သက်သေ တစ်ယာက်ရဲ့ စာ ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:18 AM 1 comments Links to this post
NLD ၏ လုပ်ရပ်က CRPP မှတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ဒုက္ခတွေ့စေပြီ
NLD ၏ ၂၀၁၀ သပိတ်မှောက်ရေး နှင့် ပါတီမှတ်ပုံမတင်ရေး လမ်းစဉ်အား ယုံကြည်မိ၍ CRPP မှတိုင်းရင်း သား ခေါင်း ဆောင် တစ်သိုက် (၁၀) ပါးမှောက် လေပြီ။ CRPP ဆိုသည်မှာ NLD ကလေးစားလိုက်နာရမည့် အဖွဲ့ သာလျှင်ဖြစ်၏။ စစ်အစိုးရမှ သဘောမတူခဲ့သည့်တိုင် CRPP ဆိုသည်မှာ လွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖြစ် သည့်အတွက် မြန်မာ့အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး လောကတွင် အဆင့် အမြင့်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
NLD နှင့် သဘောတူထား သော ဆုံးဖြတ်ချက်အား တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များက သစ္စာရှိရှိ လက်ဝယ် ပိုက်ခဲ့၏။ NLD ပါတီမှတ်ပုံတင်မည် ဆိုသည့်အခါ CRPP ခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်ပင်သော ကြေငြာချက် ထွက်မလာခဲ့ပါ။ NLD ပါတီတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် အသိပေးရုံသာ ရှိခဲ့၏။
NLD လုပ်သမျှ စေတနာ အမှား ဟူ၍ တော့လက်မခံနိုင်ပါ။ ယခုတော့ တိုင်းရင်းသားပါတီကြီး ၄ ခု ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်မည်ဟု သတင်းထွက်လာ၏။ CRPP အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက် ၍ တစ်ခုခုတော့ ပြောပါဟု NLD အား တောင်းဆိုလိုသည်။ CRPP တွင် ပါဝင်သော တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ် ကုန်ပြီ။ သူတို့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ၀င်ရန် မစွမ်း သာတော့ပါ။ NLD ကလည်း ရှိသမျှ ၄၈ နေရာစလုံး ၀င်ဖို့ လျာထား ပြီး လေပြီ။ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး လက်တွဲခဲ့သော တိုင်းရင်းသား ပါတီများကို သစ္စာဖေါက်ခဲ့၏။ CRPP ပါဝင်သော တိုင်းရင်း သားပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်စေရန် (သို့) ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရစေရန် ဘာမျှ မလုပ်တော့ပါ။ မိမိအာဏာရရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေ လေပြီ။ တိုင်းရေးပြည်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျှင် အာဏာရ အောင်ယူရမည်ဖြစ်သော်လည်း တစ်ချိန်က အာဏာရခဲ့သော မိမိ၏ မဟာမိတ်ကိုလည်း လှည့်ကြည့်ရပေမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရှိန်က ကြီးမားလွန်းသည်ဖြစ်၍ CRPP မှတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များကလည်း NLD ၏ လုပ်ရပ်အပေါ် မပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်ရ သည်
NLD ပါတီ သည် မဟာမိတ်ကို သစ္စာဖေါက်တတ်သည်ဖြစ်၍ လက်တွဲ၍ မဖြစ်နိုင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် သာဖြစ်ပါ၏။
NLD ပါတီအတွက်ကတော့ ဘာလုပ်လုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရှိန်ဖြင့် လူထုထောက်ခံမှုရနေသည် ဖြစ်၍ အဆင်ပြေနေ၏။အခြား သောပါတီများ အ တွက်ကတော့ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ပြည်သူအတွက် ဘာမျှ လုပ်မပေး နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်၏ လုပ်ချင်တာလုပ်၍ မရပါ။ ယခုတော့ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှ ရှေ့မှီနောက် မှီ လူကြီးများ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား တို့အတွက်ဘာမျှလုပ်မပေးနိုင်ဖြစ်ရပြီ။ ရှေ့မှီနောက်မှီ လူကြီးများ မှာ သက်ဆိုင်သူများ အတွက် အဖိုးတန်များဖြစ်ကြ၏။
CRPP မှတိုင်းရင်းသားပါတီများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ခေါင်းဆောင်များပြန် လည်လွတ်မြောက်လာမှသာလျှင် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး လုပ်ဆောင်မည်ဟု မသက်မသာဖြင့် မူဝါဒချမှတ်ခဲ့ရ၏။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့်လည်း လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရဲဝံ့စွာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ မေတ္တာရပ်ခံအပ်သည်။
NLD ပါတီ မှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော တိုင်းရင်း သားနယ်မြေများတွင် NLD အားမဲမထဲ့ကြရန် တောင်းဆိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကလည်း တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများ တွင် NLD မှ အမတ်လောင်းများ ကိုပြန်လည် ရုတ်သိမ်းရန် တောင်းဆိုသည်။ NLD ၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် ဗမာတွေသစ္စာဖေါက်သည်ဟု အပြော ခံရလျှင် NLD မှ အဖိုးအိုတစ်သိုက်မှာ သာ တာဝန်ရှိကြောင်း တင်ပြအပ်သည်။
နိုင်ငံရေးတွင် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်ချက်နှင့်မူဝါဒများ ရှိဖို့လို၏။ မူဝါဒများကို ညှိနှိုင်း ရာတွင်လည်း ရလာဒ်များ အပေါ် သစ္စာရှိဖို့လို၏။ NLD မှပြော သော ဒုတိယ ပင်လုံဆိုသည် မှာ လူကြားကောင်းအောင် အသံကောင်း ဟစ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ပြီဖြစ်၏။ စေတနာရင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ အစိုးရအား တိုင်းရင်း သားအရေးဘန်းပြ၍ အကြပ်ကိုင်ခြင်းသာဖြစ်၏။
အောက်တွင် (မဇ္ဈိမ) သတင်းဌာန၏ တင်ပြချက် နှင့် ဧရာဝတီသတင်းဌာ ၏ တင်ပြချက်ကို လေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြပါ၏။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ သိသာရန် အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့လူငယ်များ အနေဖြင့် CRPP ဟုဆိုလျှင်ပင် မသိကြ၍ဖြစ် ပါသည်။
အဖျက်သိမ်းခံ တိုင်းရင်းသား ပါတီကြီး လေးခု မှတ်ပုံတင်ရန်ရှိ
ကျော်ခ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၄၈ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထင်ရှားသည့် တိုင်းရင်းသား ပါတီကြီး လေးခုက လူထုအရေးကို တရားဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့အတွက် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန် စီစဉ်နေကြကြောင်း ၎င်းပါတီများ၏ တာဝန်ရှိသူများ က ပြောသည်။
ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် SNLD၊ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ALD၊ မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် MNDF နှင့် ဇိုမီး အမျိုးသား ကွန်ကရက် ZNC တို့က ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါတီ တာဝန်ရှိသူများက တညီတည်း ပြောဆိုကြသည်။
ဦးခွန်ထွန်းဦး ခေါင်းဆောင်သည့် SNLD ပါတီမှာ ၂၀၁၀ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအရ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ခဲ့ရပြီး ကျန်ပါတီ သုံးခုမှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့် လက်ထက်ကတည်းက ဖျက်သိမ်း ခံထားရသည့် ပါတီများ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကို ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီး မှတ်ပုံမတင်ဘဲ နေခဲ့ကြသည့် ပါတီများ ဖြစ်သည်။
“ပထမ ဦးစားပေး အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ကိစ္စနဲ့ ဥက္ကဌ (ဦးခွန်ထွန်းဦး) နဲ့ အတွင်းရေးမှူး (ဦးစိုင်းညွှန့်တင်) တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေကို လုံးပန်းနေပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ပါတီ ဗဟိုဦးစီး အစည်းအဝေး လုပ်နေပါတယ်။ တင်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာ များပါတယ်” SNLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုင်းလိတ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက် ယှဉ်အရွေးခံရန် မသေချာသေးဟု ဆိုသည်။
SNLD သည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မဲအများဆုံး ရရှိခဲ့ကာ တနိုင်ငံလုံး၌ ဒုတိယ မဲအများဆုံး ရရှိသည့် ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
တတိယ မဲအများဆုံး ရရှိထားသည့် ရခိုင် ALD က ဖေဖေါ်ဝါရီလဆန်းတွင် မှတ်ပုံတင်မည်ဖြစ်ပြီး ကြားဖြတ်
ရွေးကောက်ပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ မဟုတ်သေးဘဲ အမျိုးသားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လယ်သမား အရေးများကို လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိကြောင်း ALD ခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင် က ပြောသည်။
“အစိုးရကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ အချက်တချို့ ပြင်ပေးတယ်။ နောက် ကျနော်တို့ ပြောတောင်းဆိုနေတဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦး တို့လို့ မင်းကိုနိုင်တို့လို နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေလည်း လွတ်မြောက်လာပြီ ဆိုတော့ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အလားတူ မွန် MNDF နှင့် ဇိုမီး ZNC တို့ကလည်း ဖေဖေါ်ဝါရီလ သို့မဟုတ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် ပါတီ မှတ်ပုံတင်ကြရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပါတီ ခေါင်းဆောင်များက ပြောသည်။
“ဒီလထဲမှာ ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအဝင် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ ဒါပြီးရင်တော့ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ရှိတယ်။ လတ်တလော အနေအထားတွေအရ ကြားဖြတ်ကိုတော့ ဝင်ပြီးပြိုင်ဖြစ်ဖို့ နည်းပါတယ်” ဟု MNDF ဒုဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငွေသိမ်း က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ကို ၁၉၈၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ရက်နေ့က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ် ၁၉ ဦး ဝင်ပြိုင်ခဲ့ရာ ငါးနေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ZNC ဥက္ကဋ္ဌ ပူးကျင့်ရှင်းထန် က “ပါတီက အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော့ အစည်းအဝေးတွေ မလုပ်ရသေးဘူး။ သူတို့ဆီက လာတဲ့ အသံတွေအရပဲ ပြောရတာ။ တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို ရဖို့ဆိုတော့ သူတို့အားလုံး သဘောတူ လိမ့်မယ်ထင်တယ်”ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့က ဦးခွန်ထွန်းဦး နေအိမ်တွင် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် အမတ်များ စုပေါင်းတွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ် ခဲ့ရာတွင် ဦးခွန်ထွန်ဦးက နိုင်ငံရေးအရ တရားဝင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန် အကြံပြုသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ၁၁ ပါတီဖြင့် စုပေါင်းထားသော စည်းလုံး ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA နှင့် ဇန်နဝါရီလအတွင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရန် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မှတ်ပုံတင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည့် ပါတီများကို လတ်တလော မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ UNA နှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPP အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ကန့်ကွက်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ယူဆနေကြသည်။
Committee Representing the People's Parliament [CRPP] ဧရာဝတီသတင်း ဌာနမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
By IRRAWADDY Wednesday, January 1, 2003
On Sept 16, 1998, the National League for Democracy (NLD) formed the Committee Representing the People's Parliament (CRPP,) after the State Peace and Development Council (SPDC) failed to respond to renewed calls to recognize the results of the 1990 elections. The committee was chaired by Aung Shwe and had ten positions. The committee was supported by 251 parliament members, including MPs from other parties. The CRPP annulled all laws promulgated since Sept 18, 1998 and called for the release of all political prisoners. Dr Saw Mra Aung, 83, chairman of the Arakan League for Democracy (ALD) and MP-elect from Arakan State, was elected as the People's Parliament president by CRPP. The SPDC immediately responded by arresting 110 NLD MPs and officials, including Dr Saw Mra Aung, who was detained from September 1998 to June 14, 2001. By the end of 1998, the SPDC had shut down 43 NLD offices, and has insisted on the dissolution of the CRPP asapre-condition for the resumption of talks with the opposition. On Oct 23, 2002 the CRPP expanded its membership from 10 to 13 with new members representing three leaders from ethnic groups.
Mayangone Township 1, Rangoon Division
In 1990 he became the chairperson of the NLD after Aung San Suu Kyi, Kyi Maung and Tin Oo were placed in detention. He was under house arrest from September 2000 to August 2001.
Member of NLD Central Executive Committee, MP
Taungtha Township 2, Mandalay Division
A member of the Myingyan Student Union between 1937 and 1941, he was elected to the Constituent Assembly in 1947 and later becameaMember of Parliament andaParliamentary Secretary.
Aye Thar Aung
ALD and UNLD
Member of Secretariats
(Not Member of Parliament)
He represents the ALD. He was imprisoned in the 1970s due to his political activities. On April 24, 2000 he was arrested and sentenced to 21 years, but was released on Aug 16, 2002 because of his deteriorting health.
She was under house arrest between 1989 and 1995. She became secretary of the CRPP after Aye Thar Aung was arrested. She was under house arrest from Sept 22, 2000 to May 6, 2002 for the second time. After Aye Tha Aung's release, she stepped down and returned the position to him.
Tin Oo, Gen.(Retd.)
He was defence minister from 1974 to 1976. He was dismissed and imprisoned when authorities accused him of being involved in an attempted coup. He was put under house arrest on July 29, 1989, and on Dec 22, 1989 he was imprisoned for three years. He was under house arrest from September 2000 to August 2001.
Sept 22, 1924
Thongwa Township 1, Rangoon Division
He isaformer NLD party treasurer and was also the deputy prime minister during the BSPP rule. He has beenaspokesperson for the NLD since Aung Shwe, Tin Oo and Aung San Suu Kyi were placed under house arrest in September 2000.
Member of Central Executive Committee, MP
Mawlamyine Gyunn Township 1, Irrawaddy Division
He is head of the NLD Irrawaddy Division. On March 26, 1991 he becameaCentral Executive Committee member after Aung San Suu Kyi, Kyi Maung and Tin Oo were placed in detention.
Lun Tin, Col.(Retd.)
Moulmein 1, Mon State
He joined the NLD after the junta's coup in September 1988. On Oct 9, 1996 he was appointedamember of Central Executive Committee and is responsible for Mon State.
Nov 14, 1926
Taungoo 2, Pegu Division
On 26 March 1991 following the arrests of Aung San Suu Kyi and Tin Oo, he was appointed treasurer of the Central Executive Comittee of the NLD. On 8 Oct 1995 he was placed in charge of the NLD Pegu Division.
Soe Myint (a) Thakhin Soe Myint
Aug 16, 1923
South Okkalapa Township 1, Rangoon Division
He was the Secretary of Myaungmya Township, of the Dobama Asiayone (We Burmese Association)apro-independence, anti-Japanese organization. He was the Regiment Commander of the BDA.
Nai Tun Thein
Thanbyuzayat 2, Mon State
He represents the MNDF and was formerly its chairperson. He was detained for six years in the 1960s due to his political activities.
Hsipaw 1, Shan State
He represents the SNLD. He was an assistant to the Indonesian military attache from 1967 to 1977.
Cin Sian Thang
Tiddim 2, Chin State
He represents the ZNC. He was detained for two years in 1972 due to his critical advice of the BSPP.
BDA = Burma Defense Army
BSPP = Burma Socialist Program Party
MNDF = Mon National Democratic Front
PBF = Patriotic Burmese Force
POCL = Patriotic Old Comrades League
SNLD = Shan National League for Democracy
ZNC = Zomi National Congress
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 7:06 AM 1 comments Links to this post